Usuku luxabisa ngaphezulu kwe-60% | Ezezimali
Ukuba kukho ibhokisi yezimanga kwizabelo zaseSpain ezingezizo ngaphandle kwenkampani yokuhambisa iDía.Le mihla yenza iindaba kuba ivelise olunye lohlaziyo oluphezulu kwimarike eqhubekayo yemarike yaseSpain kule minyaka idlulileyo. . Kwinqanaba lezenzo zabo phezulu phantse ngama-70% kwiseshoni enye yorhwebo. Oko kukuthi, umtyali mali otyale i-10.000 euros ekuqaleni kweveki, uya kuba efumene inzuzo engekho ngaphantsi kwe-euro ezingama-7.000. Into enqwenelwa yinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Zuza imali eninzi ngexeshana elifutshane kakhulu.
Bonke, emva kokuba le nkampani ishiye isalathiso se-equity index, i-Ibex 35, kunyaka ophelileyo. Ngenxa yesimo sayo sobuchwephesha, yayikhe ilahlekelwe ngaphantsi kweepesenti ezingama-80 kumaxabiso emarike yemasheya. Emva kokuthengisa iminyaka emininzi kwinqanaba 5 okanye 6 euro isenzo. Ukuwa kamva kwehla kwiyunithi ye-euro kwesinye sezohlwayo eziqatha ezifunyenwe ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi kule minyaka idlulileyo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba yeyona nto ibaluleke kakhulu kwii-equities zesizwe.
Kodwa akukho mntu ucinga ukuba kwenzeka ntoni kwezi ntsuku kwaye bakwazile ukwenza eli xabiso libuyele kumaphepha aphambili eendaba zoqoqosho. Ngentshukumo yeshishini ebambe bonke abagcini ngonyawo olwahlukileyo. Ngokusebenzisa ibhidi yokuthatha kwakhona enomdla kakhulu kwimfuno yabasindisi abathathe izikhundla kule nkampani yokubaluleka okukhethekileyo. Ngexabiso elicinga ukuba yipremiyamu kuqikelelwa malunga nama-55 % kwixabiso lokuvala le-DIA ngalo Mvulo udlulileyo.
1 Usuku: I-OPA kwi-0,67 euro
2 Ishiywe ngabatyali mali
3 Iziphumo zeshishini
4 Nge-premium ye-56%
5 Ukuya kwi-OPA okanye hayi?
6 Akubandakanyi kuluhlu kwimarike yemasheya
Usuku: I-OPA kwi-0,67 euro
Isizathu soku kunyuka okukhulu kwimarike yemasheya kungenxa yokuba umtyalomali obalulekileyo uFridman usungule ibhidi yokuthatha i-Día kwii-euro ezingama-0,67 kwaye ke iya kwenza ukongezwa. Ukuphendula kwiimarike zezabelo kuye kwangoko kwaye iindawo zokuthenga ziye zabekwa ngokucacileyo ngakumbi kubathengisi. Ingxowa mali yaseLuxux iLoneone, isithuthi sotyalo-mali sosomashishini waseRussia, idlulisele kwiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoKhuseleko (CNMV) ngeenjongo zayo zokwenza ibhidi yokuthabatha, ngengcebiso kaGoldman Sachs, kwi-100% yenkunzi yetyathanga leyo Kuya kulandelwa kukunyuka kwemali eyi-500 yezigidi.
Ingcaciso abayinikileyo kule ngxowa-mali yotyalo-mali kukuba "inkampani ifuna umbono omtsha, isicwangciso esitsha kunye nesisombululo sezemali esisombulula iimfuno zokuhlawulwa kwexesha elifutshane kunye nokuqinisekisa ikamva lexesha elide le-DIA." Kwelinye icala, i-OPA ifuna, kwelinye icala, Ukwamkelwa kwe-CNMV, kwaye iphantsi kwabanini zabelo abamele ubuncinci i-35,5% yezabelo zizonke zale nkampani idwelisiweyo bayayamkela. Into ebonakala ngathi iyinto efanelekileyo ngalo mzuzu.
Ishiywe ngabatyali mali
Lo msitho wokudibana wenzeka ngexesha lomdla omncinci kakhulu kwicala labatyali mali nalapho ukutshintshiselana kwezokhuseleko kwiimarike kuye kwehla ngamandla amakhulu. Oko kukuthi, i umthamo wekhontrakthi ibiphantsi kakhulu kwaye oku akuncedisi ngokuthatha izikhundla kwelinye lamaxabiso athile eSpeyin. Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba kwiinyanga ezidlulileyo uninzi lwabatyali zimali abancinci nabaphakathi bazishiyile izikhundla zabo kwisitokhwe. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwinqanaba leziseko zalo.
Ngoku Lihambile ixesha lokuvula izikhundla ngeli xabiso, kuba kukunyuka okugubungeleyo, khange kunike izizathu zokuthenga izabelo njengoko ixabiso lezabelo lye lahlengahlengiswa kuleyo ibonisiweyo ukusukela ngethuba lokuthatha imali. Ke ngoko, eli nyathelo aliloncedo kwimidla yokwenyani yabasindisa. Ubuncinci kumaxabiso apho kucatshulwe khona ngalo mzuzu kanye ukusukela le nto yeshishini ibothusile bonke abameli bezemali. Ngayiphi na imeko, akunakwenzeka ukuba kwiintsuku ezizayo ziya kukwazi ukoyisa isithintelo ebesikuso kwiyunithi ye-euro.
Ngexesha leenyanga ezilithoba zokuqala zonyaka, ukuthengisa okuthelekiswayo kweQela le-DIA, Ikhule i-2,7%, ngaphandle kwesiphumo sekhalenda. Nangona kunjalo, kubandakanya nefuthe lokwehla kwexabiso lemali yaseBrazil naseArgentina, ukuthengisa kwehle nge-9,0%, emele ukuthengisa okupheleleyo phantsi kwebhanile ye-6.949 yezigidi zeerandi. Iziphumo ezingekamkelwa kakuhle ziiarhente ezahlukileyo zemali. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba isindululo sabahlalutyi beemarike zezabelo sasikukuba bahlukane nezikhundla zabo.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba le nkampani yokuhambisa ukutya ayihambi maxesha amahle ngokwembono yeshishini. Ngale ndlela, bekukho amarhe malunga nomdla wamanye amaqela okusasaza e fumana lo mgca weshishini kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Kuba, enyanisweni, imfazwe yokufumana ulawulo kwivenkile yesuphamakethi ingaphezulu kokucacileyo, kwaye nalapho iMercadona inomdla wokuvula izikhundla zeshishini, kuxhomekeke kumjikelo wemicimbi ethatha ukusukela ngoku.
Kuzo zombini ezi meko, inye into icacile kwaye oko kukuthi iDia isekwimeko enzima kakhulu. Emva kwenqanaba elibonakalayo lokuzola apho uluhlu lwalo belungene kwezi veki zidlulileyo, yonke into itshintshile emva kokufunda ukuba ileta yokuqala isungule ibhidi yokuthatha i-0,67 euros ngesabelo ngasinye. Ngumsebenzi obandakanya ipremiyamu ejikeleze i56%. Inokuba yinzuzo kakhulu kubatyali zimali bokugqibela, oko kukuthi bangene kwixabiso kwiintsuku zokugqibela kuba banokwenza inzuzo ebonakalayo kulo msebenzi. Ngaphezulu kwama-50% kwinto enokuba luncedo kakhulu kwimidla yakho.
Enye into eyahluke mpela yimeko ye- abatyali mali bokuqala kwaye bazithengile izihloko zabo nge-5 okanye i-6 euro. Kule meko, akukho mathandabuzo ukuba baya kuphulukana nemali eninzi apha endleleni njengoko ixabiso lesicelo sokuthatha okanye lidlula iyunithi enye ye-euro. Nangona kulindeleke ukuba kubekho enye intshukumo yezi mpawu ziya kuphakamisa ixabiso lesithembiso. Nangona kunjalo, umahluko ongalindelwanga ukuba ube mkhulu okanye ubaluleke kakhulu. Abo sele bekwinkampani iminyaka eliqela abanakukhetha ngaphandle kokucinga ukuba baya kujongana nelahleko enkulu kulo msebenzi.
Ukuya kwi-OPA okanye hayi?
Le yindlela yabasebenzisi bemakethi yesitokhwe okwangoku abekwe kwixabiso. Ewe, abayi kuba nasinye isisombululo ngaphandle kokuya kwibhidi yokuthatha, nokuba inzima ngokwenene kubo. Ukuba abenzi njalo awuyi kuba neengxaki ezininzi ekuthengiseni izihloko zale nkampani. Phakathi kwezinye izizathu, kuba abazukubakho abathengi aboneleyo ukwenza le ntengiselwano ngokusemthethweni. Ngale ndlela, banokuphulukana nemali engaphezulu kwizikhundla ezivulwe ngoSuku Oko kukuthi, esona sisombululo sisiso kukuya kwi-OPA. Kwaye ukuba oku kuphuculwe, kungcono kakhulu kuye wonke umntu.
Kwelinye icala, okwangoku amaxabiso amaxabiso angene kwinqanaba lokuzinza ebusweni bento enokwenzeka kwiintsuku ezizayo. Kule meko ngokubanzi, izikhundla zinokuvulwa ngethemba lokuba ixabiso le-OPA linokunyuka. Ngale ndlela, bakwimeko yokuwenza umsebenzi ube nenzuzo. malunga ne-5% okanye i-10%. Ewe kunjalo, hayi ngaphezulu kakhulu kuba indlela ephezulu ngoku inomda. Ingxaki yokwenyani ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi ekudala behleli kwilungu lemarike eqhubayo kazwelonke.
Akubandakanyi kuluhlu kwimarike yemasheya
Ngayiphi na imeko, inye into ecace gca kwaye yile yokuba ngexeshana elincinci asisayi kuphinda siyibone le nkampani kwicandelo lokuhambisa kurhwebo kwiimarike ze-equity. Kulungile umcimbi wexesha kwaye yonke into inokuvela ngokukhawuleza kunokuba ubucinga ekuqaleni. Isizathu esongezelelekileyo sokwenza isigqibo kwisithuba esifutshane sexesha kwaye eyenzekayo ukuya kwibhidi yokuthatha kwakhona efike kwezi ntsuku kwimarike yezemali.
Ngelishwa, azikho ezinye iindlela ezinikezelwa kubatyali mali. Apho, kungcono ukhethe ukushiya ixabiso nelahleko kunokuba ushiye yonke into kwiimarike zezemali. Ayisiyonto ilungileyo yokuseta kwimidla yabathengisi okwangoku. Kuya kufuneka benze isigqibo ngenye indlela okanye enye. Ingxaki yokwenyani ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi ekudala behleli kwilungu lemarike eqhubayo kazwelonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Usuku luxabisa ngaphezulu kwe-60%